Akụkọ Bible: Ụdị Ihe Oriri Ọhụrụ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ị̀ PỤRỤ ịkọ ihe ndị a na-atụtụrụ n’ala? O yiri mmiri kpụkọrọ akpụkọ. Ọ dị ọcha, dị gịrịgịrị, ma dị peke peke. Ma ọ bụghị mmiri kpụkọrọ akpụkọ; ọ bụ ihe a na-eri eri.
O ruwo naanị ihe dị ka otu ọnwa kemgbe ụmụ Izrel hapụrụ Ijipt. Ha nọ n’ọzara. E nwere ihe oriri dị nta n’ebe ahụ, n’ihi ya, ha malitere ime mkpesa, sị: ‘Ọ gaara adị anyị mma ma a sị na Jehova gburu anyị n’Ijipt. Ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, anyị nwere ihe oriri niile anyị chọrọ n’ebe ahụ.’
N’ihi ya, Jehova sịrị: ‘M ga-eme ka nri si n’eluigwe zoo dị ka mmiri.’ Jehova mekwara otú ahụ. N’ụtụtụ echi ya, mgbe ụmụ Izrel hụrụ ihe ọcha nke a daranụ, ha malitere ịjụ onwe ha, sị: ‘Gịnị bụ ihe a?’
Mozis sịrị ha: ‘Nke a bụ nri Jehova nyere unu ka unu rie.’ Ụmụ Izrel kpọrọ ya MANA. Ọ na-atọ ka iberibe achịcha e ji mmanụ aṅụ mee.
‘Onye ọ bụla ga-atụtụrụ ókè ọ ga-erichali,’ ka Mozis gwara ha. Nke a bụ ihe ha na-eme kwa ụtụtụ. Ma mgbe anyanwụ dịwara ọkụ, mana nke fọdụrụ n’ala na-agbaze.
Mozis gwara ha ọzọ, sị: ‘Ọ dịghị onye ga-edebe mana ụfọdụ ruo echi.’ Ma ụfọdụ n’ime ụmụ Izrel egeghị ntị. Ị̀ ma ihe merenụ? N’echi ya, mana nke ha debere gbara ikpuru, ọ malitekwara isi ísì!
Ma, ọ dị otu ụbọchị n’izu mgbe Jehova gwara ha ka ha na-achịkọta mana okpukpu abụọ. Ọ bụ n’ụbọchị nke isii. Jehova gwara ha ka ha na-edebe ụfọdụ ya ruo echi ya, n’ihi na ọ gaghị eme ka mana ọ bụla daa n’ụbọchị nke asaa. Mgbe ha debere mana ruo ụbọchị nke asaa, ọ dịghị agba ikpuru, ọ dịghịkwa esi ísì! Nke a bụ ọrụ ebube ọzọ!
N’afọ niile ahụ ụmụ Izrel nọrọ n’ọzara, nri Jehova nọ na-enye ha bụ mana.
Ọpụpụ 16:1-36; Ọnụ Ọgụgụ 11:7-9; Joshua 5:10-12.
Na foto a, gịnị ka ndị a na-atụtụ n’ala, gịnị ka a na-akpọ ya?
Olee ntụziaka Mozis nyere ụmụ Izrel banyere ịtụtụrụ mana?
Gịnị ka Jehova gwara ụmụ Izrel ka ha mee n’ụbọchị nke isii, ọ̀ bụkwa n’ihi gịnị?
Olee ọrụ ebube Jehova rụrụ mgbe e debere mana ahụ ruo n’ụbọchị nke asaa?
Ogologo oge hà aṅaa ka Jehova ji mana zụọ ụmụ Izrel?
Gụọ Ọpụpụ 16:1-36 na Ọnụ Ọgụgụ 11:7-9.
Gịnị ka Ọpụpụ 16:8 na-egosi banyere mkpa ọ dị anyị ịkwanyere ndị a họpụtara n’ọgbakọ ùgwù? (Hib. 13:17)
N’ọzara, olee otú e si na-echetara ụmụ Izrel kwa ụbọchị na ndụ ha dabeere n’ebe Jehova nọ? (Ọpụ. 16:14-16, 35; Deut. 8:2, 3)
Olee ihe Jizọs sịrị na mana ahụ na-anọchi anya ya, oleekwa otú anyị si erite uru site ‘n’achịcha a nke sitere n’eluigwe’? (Jọn 6:31-35, 40)
Gụọ Joshua 5:10-12.
Afọ ole ka ụmụ Izrel riri mana, oleekwa otú nke a si nwalee okwukwe ha, gịnịkwa ka anyị pụrụ ịmụta site n’akụkọ a? (Ọpụ. 16:35; Ọnụ Ọgụ. 11:4-6; 1 Kọr. 10:10, 11)